Maalinta Dimuqraadiyada Aduunka Oo Maanta Hargeysa Laga Xusay + Sawiro
Hargeysa(HWN) Magaalada Hargeysa Ee Caasimada Dalka Jamuuriyada Somaliland Waxa saaka si balaadhan looga xusay maalinta Dimuraadiyada Aduunka Oo Ku Beegan 15 Sepetmber .
Munaasibada lugu xusaayo maalinta dimuqraadyada aduunka Oo Ka DHacday Hutel Mansor Ee Magaalada Hargeysa waxa ka soo qayab galay Xubno kala matalaayay Asxaabta Dalka Ururada aan dawliga ahyn iyo sido kale Dad weyne Aad u tiro badan .
Ugu horayn waxa madashaasi ka hadlay Agaasimaha Dallada SONSAf Maxamed Axmed Maxamuud (Barwani) waxaana uu sheegay in uu maanta ku faraxsanyanhay in uu ka soo qayb galyo munaasibadani waxaana Uu Yidhi ” Somaliland waa meshii ugu horaysay ee marka la isku geeyo dhulka somalilada ay doorasho xor iyo xalaal ahi ay ka dhacaday markaa in maalintan oo kale la xuso waa arin wanagsan ayuu Yidhi Barwaani”.
Wasiirkii Hore Wasaarada kaluumaysiga somliland Cabdilaahi Geeljire ayaa isna intaasi raaciyay “maalintan caalamku u qoondeyeen in ay noqoto maalinta Dimuqraadiyada aduunka waa maalin aan inaguna la qaadanay in aynu inagauna xusno waa muhiim”.
Gudoomiyaha Ururuka Suxufiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi jaamac xuuto ayaa isna sido kale soo dhaweeyay maalintani waxan uu Yidhi ” waa wax lala yaabo in xubno ka mida xukuumadu way maalin walba u hanjabto saxaafada arintan oo ah arinta aynu maanta ka hadlayno ee dimuqraadyada Dalka ka jirta .
Dhankooga waxa hadalada iska daba qaatay Gudoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Iyo Cabdirashiid jeeni Oo ka mida masuuliyiinta Xisbiga Waddani waxayna ka dhawaajiyeen labada masuulba in ay haboontahay in la dhawro dimuqraadyada Somaliland ka hir gashay si aynu beesha caalamka kugula tartan